Ithemba ngemidlalo yePremiership
LIKHONA ithemba lokuthi lungase lumenyezelwe usuku lokubuya kwemidlalo yePremier Soccer League Isithombe: BACKPAGEPIX
Mthokozisi Mncuseni | June 3, 2020
KUNETHEMBA lokuthi lingase limenyezelwe usuku okungase kubuye ngalo imidlalo ye-Absa Premiership kodwa isixako wukuthi kuningi okufanele kwenziwe ngesikhathi esincane.
Ziyalikhulisa ithemba izincomo eziphume emhlanganweni obuseSafa House ngoMsombuluko lapho bekuhlangene khona ikomiti elikhethekile elibunjwe yizikhulu zeSouth African Football Association (Safa), nezePremier Soccer League (PSL).
Umsebenzi wekomiti wukuqinisekisa ukuthi ngeke kube nengozi ukubuya kwebhola. Isizini yaseNingizimu Afrika isalelwe yimidlalo ewu-10 ukuba igoqwe. Umbango uphakathi kweKaizer Chiefs, Mamelodi Sundowns ne-Orlando Pirates.
Nasemathukwini amaqembu aseLimpopo asenkingeni kanti naseThekwini AmaZulu alokhu ehlale emsileni selokhu isizini iqalile.
Selokhu uNgqongqoshe wezeMidlalo, uNathi Mthethwa, ememezele ngempelasonto ukuthi sekungaqalwa kujinywe kwezemidlalo okuthintwanayo kuzo njengonobhutshuzwayo njengoba sekuwu level 3 womvalelandlini, likhulile isasasa nakubalandeli okufakazelwa nawukuhlangana kwekomiti.
Yize uMthethwa ekumemezele lokhu kodwa akazange afihle ukuthi ukubuya kwemidlalo akuyona into ayicabangayo okwamanje.
UMthethwa ubeqhakambisa ukuthi iSafa nePSL kufanele baqinisekise ukuphepha kwabantu kuqala. Ubekhona emhlanganweni wangoMsobuluko.
Nakuba ikomiti seliyinkankanyile indlela elicabanga ukuthi iyona okumele kuhanjwe ngayo nezokwenza kube lula futhi kube wokuphephile ukubuya kwemidlalo kodwa alithi vu ngokuyikona okuzokwenzeka. Lizeseka ngokuthi kusafanele liqedele konke nohulumeni kuqala.
Kuzocaca maduze nokho ngombiko wekomiti ngoba uMthethwa unike ososeshini abafuna ukubuyela emidlalweni amasonto amabili ukuba bambhalele bachaze ukuthi bazoyivikela kanjani impilo yabantu uma kubuyelwa ekuziqeqesheni ngokugcwele.
Kuvelile nokho emhlanganweni wangoMsombuluko ukuthi uDanny Jordaan, umengameli weSafa, nosihlalo wePSL, u-Irvin Khoza, yibona okufanele babhalele uMthethwa incwadi athe uyifuna emasontweni amabili.
Akugcinanga ngalokho kepha izikhulu yizo futhi ezikhonjwe yikomiti (le-COVID-19) ukuba zicacisele uZweli Mkhize noFikile Mbalula ngezinhlelo zezempilo nangendlela okuzohanjwa ngayo uma kuyiwa emidlalweni.
Kukona konke lokhu inkinga yisikhathi kwazise iFifa iwanike kuze kube uJulayi 31 amaligi ukuba aqedele amasizini ezigaba ezinkulu neziphakela ezinkulu.